विद्यालय बन्द नगरे स्थिति भयावह : विज्ञ - Bidur Khabar
विद्यालय बन्द नगरे स्थिति भयावह : विज्ञ
विदुर खबर २०७८ वैशाख १ गते ८:३०
नुवाकोट । कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण दर देखिएका ठाउँमा तत्काल विद्यालय बन्द नगरे भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत संक्रमण बढी देखिएका ठाउँका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
उनका अनुसार कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र विस्तार भइरहँदा बालबालिकाहरू गत वर्षको दाँजोमा धेरै प्रभावित भइरहेका छन् । कोरोनाको पहिलो लहरमा उनीहरूमा कम प्रभाव देखिएको थियो । लकडाउनका कारण बालबालिका घरमै बस्नु, सामाजिक रूपमा बढी घुलमिल नहुनु र शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा बन्द रहनुले संक्रमण भयावह हुन नपाएको उनको भनाइ छ । ‘केही महिनादेखि विद्यालय सञ्चालनमा छन् । पहिलेको दाँजोमा बढी संक्रामक र मृत्यु गराउन सक्ने भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट आउँदा बालबालिका बढी प्रभावित हुन थालेका हुन्,’ उनले भने ।
संक्रमण देखिएको ठाउँमा विद्यालय बन्द नगरे मुलुकभरको संक्रमण दरमा अत्यधिक वृद्घि हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ । ‘बच्चामा कोभिड एसिम्टोम्याटिक (लक्षण नभएको) देखिने दर उच्च देखिएको छ भने यस्तो अवस्थामा घर, समाज, विद्यालयमा बच्चासँग सामाजिक दूरी कायम राख्नु जटिल चुनौती हुन जान्छ । किनकि उनीहरूसँग सबैको सामीप्यता स्वभावतः अरू उमेर समूहको भन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीले समेत सरकार तुरुन्त ‘एक्सन’ मा गएर विद्यालयमा पठनपाठन रोक्नुपर्ने सुझाए । हाल बालबालिकाबाट संक्रमणको विस्तार भइरहेको दाबी गर्दै डा. बीसी भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालकहरूले मात्र बन्द गर्न हुन्न भन्नु हुन्छ । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले संक्रमणको चक्र तोड्न (चेन ब्रेक) विद्यालय बन्द गर्नु नै पर्छ । यो रोग अत्यधिक फैलिएपछि विद्यालय बन्द गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ समाजमा संक्रमण विस्तारमा धेरै सघाउने वर्ग पनि बालबालिका हुन् । अहिलेकै अवस्थामा कम्तीमा ३–४ साता विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन नगरिए सघन उपचारमा जाने र मृत्यु हुनेहरूको संख्या अप्रत्याशित बढ्न सक्ने उनले चेतावनीसमेत दिए ।
मंगलबार मुलुकभर ४ हजार ३८६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४६० जना संक्रमित थपिए । जसको संक्रमण दर १०.४८ प्रतिशत छ । ९७ जना आईसीयू र २० जना भेन्टिलेटरमा गरी ११७ जना संक्रमित सघन उपचारमा छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाकै कारण ५ जनाको मृत्यु भएको छ । सोमबार यो संख्या १३ थियो । हालसम्म ३ हजार ५८ जनाको मृत्यु भएकामा ९ वर्षसम्मका २४ जना र १०–१९ वर्ष उमेर समूहका २२ जना छन् ।
दोस्रो मात्राको खोप पर्खंदै वृद्धवृद्धा
विराटनगर– ८७ वर्षीय समरबहादुर श्रेष्ठले माघ २३ मा कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका थिए । चिकित्सकले उनलाई एक महिनापछि दोस्रो मात्रा दिने जानकारी गराएका थिए । दोस्रो मात्रा अब कहिले लगाउन पाइन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन । दोस्रो मात्रा लगाउन उनी पर्खिरहेका छन् ।
दोस्रो मात्रा बेलामा लगाउन पाइने वा नपाइने चिन्तामा ६७ वर्षीया सीता पराजुली छिन् । पर्खाइमा ८६ वर्षीय प्रेमबहादुर तामाङ पनि छन् ।
विराटनगरस्थित विराटेश्वर वृद्धाश्रम सेवा समितिका श्रेष्ठ, पराजुली र तामाङलगायत ६२ जना वृद्धवृद्धालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले २३ माघमा खोपको पहिलो मात्रा दिएको थियो । उक्त आश्रममा ६० नाघेका ६२ जना छन् । अधिकांश हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । पहिलो मात्रा लगाएका सबैको स्वास्थ्य दुरुस्त रहेको आश्रमका प्रमुख जगतप्रसाद अर्ज्यालले बताए । ‘खोपको दोस्रो मात्रा दिन ढिलाइ भइरहेको जस्तो लाग्छ,’ अर्ज्यालले भने ।
मोरङमा हालसम्म ६३ हजार ८ सय ८ जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी तथ्यांक अधिकृत कृति बस्नेतले बताइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विज्ञ डा. रोशन पोखरेलका अनुसार भारतको कोभिसिल्ड लगाएकाले १० देखि १२ साताभित्र दोस्रो खोप र चीनको भेरो सेल लिएकाले २८ दिनभित्र दोस्रो मात्रा लगाइसक्नुपर्छ । आउँदो ७ वैशाखदेखि १५ सम्म अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई दोस्रो खोप दिने तालिका छ । यसपछि १५ जेठबाट ५५ वर्ष माथिकालाई खोपको दोस्रो मात्रा दिइने उनले बताए ।